Print Email 264
သန္ဓေသားဘဝတွင် အဓိက(သို့) အရေးကြီးသော ဦးနှောက်အစိတ်အပီုင်းနှင့်တကွ ဦးခေါင်းခွံ၊ ဦးရေပြားမဖွံ့ဖြိုးခြင်း။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Neural tube မပါရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တတ်တာကြောင့် ပထမကလေးတွင် ဒီရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလျှင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ယခုကိုယ်ဝန်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများသောကြောင့် အထူးသတိချပ်သင့်ပါတယ်။ အတက်ကျဆေးသောက်နေရသော၊ အင်ဆူလင်ဆေးထိုးနေရသော ရောဂါသည်များ၊ ဓာတု ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများ(ခဲ၊ မာကျူရီ၊ နစ်ကယ်လ်) နှင့် ထိတွေ့နေရသူများ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတွင် ်folic acid ပုံမှန်သောက်ခြင်းဖြင့် neural tube မပါရှိခြင်းကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း အယ်လ်ထရာဆောင်း ရိုက်ခြင်း၊ alpha feto protein ဟုခေါ်သော ပရိုတိန်းတစ်မျိုးကို မိခင်၏ သွေးထဲတွင်ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သန္ဒေသား၏ ရောဂါကိုစောစီးစွာဖြင့် သိရှိနိုင်ပါတယ်။
2. Phototherapy (အသားဝါကလေးများကို မီးပြခြင်း)
မွေးကင်းစကလေးများတွင် လူကြီးများနှင့် ယှဉ်လျှင် သွေးနီဥ ပြိုကွဲတာ ပိုများတာကြောင့် ဘီလီရူဘင်ဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးများ နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မွေးပြီး ၂ ရက်မှာလည်း ပုံမှန်အသားဝါတတ်ပါတယ်။ ရရက်မှာ ပျောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးပညာအရ Physiological Jaundice လို့ခေါ်ပါတယ်။ မွေးစမှာ ၀ါနေလျှင်၊ မွေးပြီး ၃ရက်မှာ စဝါပြီး ၁ပတ်ကျော်၊ ၂ပတ်ကျော်နေလျှင် အသားဝါရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသားဝါရောဂါ ဖြစ်လျှင် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ပြီး မီးပြဖို့လိုလျှင် မီးပြရပါမယ်။ အသားဝါရောဂါသည် အထူးသဖြင့် မွေးကင်းစများမှာ မပေါ့ဆသင့်တာကြောင့် လိုအပ်သည်များကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ အထူးလိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
3. Vaccination ကလေးကာကွယ်ဆေးများ
ဆရာရှင့် ရိုသေစွာဖြင့်မေးပါရစေ။ ကျမသမီးလေးက အသက် ၃ နှစ်ပါ။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ကာကွယ်ဆေးက ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ထိုးရပြီး ဘယ်နှကြိမ်ထိုးရမလဲသိချင်လို့ပါရှင့်။ ကလေးတွေအတွက် Pentavalent Vaccine ငါးမျိုးတွဲကာကွယ်ဆေးဆိုတာ (ဆုံဆို့ + ကြက်ညှာ + မေးခိုင် + အသည်းရောင် (ဘီ)ပိုး+(ဟီမိုဖီးလပ်စ်-ဘီ) ပိုး ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တယ်။ (ဟီမိုဖီးလပ်စ်-ဘီ) ပိုးကနေ ဦးနှောက် အဖုံးလွှာရောင်တာ၊ နူမိုးနီးယားနဲ့ နားပြည်ယိုတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Haemophilus influenzae typeb(Hib) ဟီမိုးဖေးလပ်စ် ဗက်တီးယား ကူးစက်ရောဂါကို တနှစ်မှာ ကလေးပေါင်း ၈ သန်းလောက်ခံစားနေရတယ်။ ၃၇၁ဝဝဝ ယောက်သေဆုံးနေရတယ်လို့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် WHO ခန့်မှန်းထားတယ်။ဦးနှောက်အဖုံးလွှာရောင်တာနဲ့ နူမိုးနီးယားတွေဖြစ်တယ်။ ၅ နှစ်အောက်ကလေးတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်။ မချမ်းသာသေးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ နူမိုးနီးယားကပိုများတယ်။
ဦးနှောက်အဖုံးလွှာရောင်ရင် ၁၅-၃၅% မှာ ရာသက်ပန် ဒုက္ခိတဖြစ်စေတယ်။ နားမကြားရတာနဲ့ ဉာဏ်ရည်နိမ့်တာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်ခွဲအောက် ကလေးငယ်တွေကို ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးပေးနေခဲ့တယ်။ ဒိနောက် Hepatitis B Vaccine အသည်းရောင် (ဘီ) ကာကွယ်ဆေးအသစ်ကို ၂ဝဝ၃-ဝ၄ ခုနှစ်ကစပြီး ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေလအထိ (၅) နှစ် စီမံချက်နဲ့ ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းထဲမှာ (၁) နှစ်အောက် ကလေးတွေကို (၃) ကြိမ် ထိုးဘို့ ထည့်သွင်းလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေလ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Hepatitis B vaccine အသည်းရောင် (ဘီ) ကာကွယ်ဆေးကို ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ်အရ မထိုးနိုင်တော့ပါ။
အခုတော့(၅) နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ နူမိုးနီးယား ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ Haemophilus type-b (Hib) (ဟေမိုဖီးလပ်စ်-အင်ဖလူရင်ဇာ ဘီ) အမျိုးအစား ဗက်တီးရီးယား ပိုးကိုပါ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ Penta Valent Vaccine ငါးမျိုးတွဲကာကွယ်ဆေးကို ထိုးပေးနေပါပြီ။ရောဂါ (၅) မျိုးကို တစ်ကြိမ်တည်းထိုးနိုင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးအသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံဆို့နာ၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါ၊ မေးခိုင်ရောဂါ၊ အသည်းရောင် (ဘီ) နဲ့ ဟေမိုဖီးလပ်စ် ဦးနှောက် အမြှေးရောင်ရောဂါ၊ ဟေမိုဖီးလပ်စ် အဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့နားရောင်တာတွေကိုပါကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကရောဂါ(၇)မျိုးအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုသာထိုးနှံနိုင်ခဲ့ရာကနေ ရောဂါ (၈) မျိုးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တော့မှာပါ။
• BCG (တီဘီ) ကာကွယ်ဆေး၊ မွေးမွေးချင်း၊ • DTP (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) ကာကွယ်ဆေး၊ ၂-၄-၆ လ၊ • HB (ဘီ) ပိုး ကာကွယ်ဆေး၊ ၂-၄-၆ လ၊ • HIB (ဟီမိုဖီးလပ်စ်-ဘီ-ပိုး) ကာကွယ်ဆေး၊ ၂-၄-၆ လ၊ • Pentavalent (DTP+HB+BiB) (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင် + (ဘီ) ပိုး + (ဟီမိုဖီးလပ်စ်-ဘီ) ပိုး ကာကွယ်ဆေး၊ 2, 4,6months ၂-၄-၆ လ၊ • OPV သူငယ်နာ-အကြောသေ ကာကွယ်ဆေး၊ ၂-၄-၆ လ၊ • Measles ဝက်သက် ကာကွယ်ဆေး၊ ၉ လ၊ • MMR (ဝက်သက် + ဂျာမန်-ဝက်သက် + ပသိရောင်) ကာကွယ်ဆေး၊ ၁၂ လ။
• HepB အသည်းရောင် (ဘီ) ကာကွယ်ဆေး = မွေးကာစ-၆-၁ဝ-၁၄ ပါတ်၊ • BCG တီဘီကာကွယ်ဆေး = ၆ ပါတ်၊ • DTwP ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင် = ၆-၁ဝ-၁၄ ပါတ်၊ • OPV ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေး = ၆-၁ဝ-၁၄ ပါတ်၊ • Measles ဝက်သက် ကာကွယ်ဆေး (၂ဝဝရ မှစသည်) = ၉-၁၈ လ၊ • TT မေးခိုင် ကာကွယ်ဆေး = ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပဌမအကြိမ်လာစဉ် တခါနှင့် ၄ ပါတ်ခြားတခါ၊
Ref: ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁၅-၆-၂ဝ၁၅ သစ်ထူးလွင်